အာဆင်ဝင်းဂါး ၊ ဒေးဗစ်ဒိန်း နဲ့ ဂန်းနား ဂန္တဝင်တွေ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ပွဲမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် မေးခွန်းများ နှင့် အဖြေများ - xyznews.co
အာဆင်ဝင်းဂါး ၊ ဒေးဗစ်ဒိန်း နဲ့ ဂန်းနား ဂန္တဝင်တွေ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ပွဲမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် မေးခွန်းများ နှင့် အဖြေများ
မနေ့က ညဦးပိုင်းအချိန် London Palladium မှာ An Audience with Arsène Wenger OBE and David Dean MBE ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဂန်းနား ဂန္တဝင် ကစားသမားတွေ နဲ့ ပရိသတ် အများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။
အဲ့ဒီပွဲက ရရှိတဲ့ ငွေတွေ နဲ့ အလှူငွေတွေကို The Twinning Project ထံ လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အဖြစ် ဂန်းနား ဂန္တဝင် အီယန်ရိုက် နဲ့ အဲလက်စ် စကော့(အမျိုးသမီး အသင်း ) တို့က ပါဝင် ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
အဆိုပါပွဲမှာ အာဆင်း နဲ့ ဒေးဗစ်ဒိန်းတို့ဟာ ပရိသတ်တွေ နဲ့ ဂန်းနား ဂန္တဝင်တွေ သိလိုသမျှ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြား ပေးခဲကြပြီး အဲ့ဒီ အထဲမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် မေးခွန်းများ နှင့် အဖြေများကို စုစည်း ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ကိုလိုတိုရေး ရဲ့ မေးခွန်း – အမ်းမရိတ်ကွင်း အပြင်ဘက်မှာ အာဆင်ဝင်းဂါး ရဲ့ ရုပ်တု ထားရှိသင့်သလား ?
ဒေးဗစ်ဒိန်း – တစ်ခွန်းထဲ ဖြေလိုက်မယ် ၊ Yes ပါ ။
မေး – အာဆင်း တစ်ယောက် အာဆင်နယ် ကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့ အပေါ် ဘာပြောချင်သလဲ ?
ဒေးဗစ်ဒိန်း – ကလပ်က အမှားအကြီးကြီး တစ်ခု လုပ်လိုက်မိတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ၊ အာဆင်း ကို အသင်းမှာ ဥက္ကဌ လို နေရာမျိုး ပေးခဲ့သင့်ပါတယ် ၊ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်သူပဲ ချချ သူဟာ အာဆင်နယ် မှာ ရှိနေသင့်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောရဲပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ခုတော့ သူ(အာဆင်း) က ကမ္ဘာ့ဘောလုံး ဖွံံဖြိုးတိုးတက်ရေးရဲ့ အကြီးအကဲ တစ်ဦး ဖြစ်နေပါပြီ ။
မေး – ခင်ဗျား(အာဆင်း) ကွင်းထဲက အဖြစ်အပျက်ကို မမြင်လိုက်ဘူး လို့ ပြောခဲ့တာမျိုးတွေက တကယ်ပဲ မမြင်လိုက်တာတွေလား ?
အာဆင်း – ကျွန်တော်သာ မြင်လိုက်တယ်လို့ ပြောခဲ့ရင် သူတို့က နောက်ထပ် မေးခွန်းတွေ ထပ်မေးတော့မှာလေ ။
မေး – အိုးထရက်ဖိုဒ့်မှာ အမှတ်ပေးဖလား ရတာ နဲ့ ဝှိုက်ဟက်လိန်းမှာ အမှတ်ပေး ဖလား ရတာ ဘယ်ဟာကို စိတ်ကျေနပ်မှု ပိုရလဲ ?
အာဆင်း – အိုးထရက်ဖိုဒ့် ပေါ့ဗျာ ။
မေး – ခင်ဗျား ငြင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တဲ့ အသင်းတွေ ဘယ်နှစ်သင်းလောက် ရှိသလဲ ?
အာဆင်း – ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်(သူတို့ဘက်က နှစ်တိုင်း ကမ်းလှမ်းလိုက် ပယ်ချလိုက်ပါပဲ) ၊ ဂျူဗင်တပ်စ် ၊ ပီအက်စ်ဂျီ ၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ၊ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်းတွေပါ ။ ကျွန်တော် အာဆင်နယ်မှာပဲ ဆက်ရှိချင်တာကြောင့် သူတို့ကို ပယ်ချ ခဲ့တာပါ ။
မေး ဆိုးလ်ကမ်းဘဲလ် ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်း ?
ဒေးဗစ်ဒိန်း – ကျွန်တော်တို့ဘက်က သူ့ကို အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေး တဲ့ အချိန် အများစုက မနက် ၁ နာရီ လောက်တွေပါ ၊ ပါပါရာဇီ တွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကျွန်တော့်အိမ်က ပန်းခြံထဲမှာပဲ စကားပြောဖြစ်ပါတယ် ၊ တစ်ညတုန်းကဆို ကျွန်တော့်သားက ကျွန်တော်တို့ကို လူမှားပြီး ရိုက်မိမလို အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
မေး – ဆိုးလ်ကမ်းဘဲလ် ကို ခေါ်ဖို့ ခင်ဗျား တွန်းအား ပေးခဲ့တာလား ?
အာဆင်း – ဒါပေါ့ဗျာ ။
မေး – ခင်ဗျား(ဒေးဗစ်ဒိန်း) အာဆင်နယ်မှာ ဒီထက် ကြာကြာ နေခဲ့သင့်တယ်လို့ တွေးမိလား ?
ဒေးဗစ်ဒိန်း – ဒါက ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ၊ ဒီမေးခွန်းက ဖြေဖို့ ခက်သလို ထိလွယ်ရှလွယ် မေးခွန်းပါပဲ ၊ ကျွန်တော့်ကို နာကျင် ခံစားစေတာ အမှန်ပါပဲ ၊ ကျွန်တော် အသင်းမှာ မရှိတော့ရင် အာဆင်း တစ်ယောက် ခံစားရမယ်ဆိုတာလည်း သိခဲ့ပါတယ် ။
မေး – အာဆင်းရေ ..ခင်ဗျား ဂျက်ကတ် ဇစ်ဆွဲဖို့ အခက်တွေ့နေတာ အိတ်ကပ် ပျောက်နေတဲ့ video အတိုလေးတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောချင်လဲ ?
ဖြေ – ဒီကိစ္စက ကျွန်တော့်အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ကိစ္စ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အဲ့တုန်းက ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရယ်မောသံကတော့ သောသောညံနေခဲ့တာပေါ့ဗျာ ။
မေး – ရိုနယ်ဒို နဲ့ မက်ဆီ ကို ခေါ်ယူနိုင်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို ဒါဆို ဘာကြောင့် ရအောင် မခေါ် ခဲ့တာလဲ ?
ဒေးဗစ်ဒိန်း – ရိုနယ်ဒို ကို ကျွန်တော်တို့ ကင်းထောက်ခဲ့ပြီး သဘောကျ နှစ်သက် ခဲ့ပါတယ် ၊ ညစာတောင် အတူစားခဲ့ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး အကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ် ၊ နောက်နေ့ကျတော့ မန်ယူနိုက်တက် က ကျွန်တော်တို့ထက် ဦးအောင် ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ အသုံးချ ခံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ ။
မေး – ခင်ဗျားရဲ့ အာဆင်နယ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတာ ဘယ်အချိန်မှာ သိသွား ခဲ့တာလဲ ?
​ဖြေ – ဇန်နဝါရီမှာ အာဆင်နယ် ဘုတ်အဖွဲ့က ကျွန်တော့် စာချုပ်ကို ရပ်တန့်ချင်ပြီလို့ ပြောလာ ခဲ့ပါတယ် ၊ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြမှုတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို အပြီးသတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
မေး – အာဆင်း တစ်ယောက် တခြား ကလပ် အသင်းတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်သင့်သလား ?
ဒေးဗစ်ဒိန်း – သူ့ကို မကိုင်တော့ဖို့ ကျွန်တော် ဖြောင်းဖြ ထားပါတယ် ၊ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အပေါ် စိုးရိမ်မိပါတယ် ၊ သူက အသက်လည်း ကြီးနေပါပြီ ၊ တစ်ပတ် သုံးပွဲလောက် ကစားဖို့ ရှိနေတဲ့ ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ဖိအားက များပါတယ် ၊ သူ့ကို ဖိအား မများစေချင်ပါဘူး ၊ သူက အခု ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ် ၊ ဖီဖာ ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာ ရာထူးယူထားတာက သူနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ ။
မေး – ဒိန်းထွက်ခွာသွားချိန်မှာ ခင်ဗျား(အာဆင်း) ကော အသင်းက ထွက်ခွာ ခဲ့သင့်တယ်လို့ ထင်သလား ?
အာဆင်း – ဒါပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ဒိန်းက အသင်းမှာ ဆက်နေပေးဖို့ ကျွန်တော့်ကို တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဆက်နေခဲ့တာပါ ၊ကျွန်တော် နောက်ထပ် ၁၁ နှစ် ဆက်နေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒေးဗစ်ဒိန်း – ကျွန်တော် သူ့ကို ဆက်နေပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာက အသင်းမှာ ကျနော့် ရှယ်ယာတွေ အများကြီး ရှိနေသေးလို့ပါ ။
မေး – အမှတ်ပေးဖလား ရခဲ့တဲ့နှစ်ရယ် ဆုဖလား နှစ်လုံး ရခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ စိတ်ထဲ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတဲ့ အမှတ်တရ ရှိလား ?
ဖြေ – အနိုင်ရခဲ့သင့်ပွဲမျိုးမှာ ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ ပွဲမျိုးကို ကျွန်တော် ပိုအမှတ်ရမိပါတယ် ။
Previous Article ယုံကြည်ပေးခဲ့ပေမယ့် ၊ ယုံကြည်မှု အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ ချန်ဘာလိန်
Next Article ဆွာရက် ကို လမ်းကြုံတုန်း လက်တုန့်ပြန်လို့ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ဘာကြောင့်ငြင်းပယ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဖွင့်ဟပြောဆိုလာတဲ့ ပက်ထရိစ် အီဗရာ